10 युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि सुझावहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि सुझावहरू
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 24/10/2020)
युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि आमा बुबा र सबै उमेरका बच्चाहरूको लागि ठूलो रमाईलो हुन सक्छ यदि तपाईं यो राम्रोसँग योजना गर्नुहुन्छ भने. युरोप महल र पुलहरूको भूमि हो, हरियो भव्य पार्क र भण्डार जहाँ जवान केटीहरू र केटाहरूले एक दिनको लागि राजकुमारी र राजकुमार हुने ढोंग गर्न सक्दछन्. छन् उत्कृष्ट पैदल यात्रा र महान आउटडोरमा रोमांचका लागि ठाउँ ठाउँ, तर बच्चाहरूसँग यात्रा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ.
प्याकिंग गर्न योजना बाट, हामीले काल्पनिक परिवार यात्राको लागि अन्तिम मार्गनिर्देशन डिजाइन गरेका छौं. केवल हाम्रो अनुसरण गर्नुहोस् 10 महाकाव्य पारिवारिक यात्रा सुनिश्चित गर्न युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि उत्तम सुझावहरू.
रेल परिवहन यात्रा गर्न सबैभन्दा वातावरण मैत्री तरिका हो. यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र द्वारा गरिएको थियो एक ट्रेन सेव, विश्व मा सस्तो ट्रेन टिकटहरु.
1. युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि सुझावहरू: तपाईंको बच्चाहरू समावेश गर्नुहोस्
एक उत्तम पारिवारिक बिदाको गोप्य कुरा हो जब सम्पूर्ण परिवार बोर्डमा हुन्छ र उत्साहित हुन्छ. यूरोप अचम्मको ठाउँहरूले भरिएको छ, आकर्षण, मनोरञ्जन पार्क, र भ्रमण गर्ने ठाउँहरू, र तपाइँका बच्चाहरूलाई युरोप यात्राको योजनामा ​​भाग लिनको लागि सपनाको छुट्टीमा परिणत हुनेछ. अग्रिम रूपमा आफ्नो अनुसन्धान गर्नुहोस्, तपाईंले भ्रमण गर्न चाहानुभएको आकर्षणहरू छान्नुहोस्, र स्पटहरू जुन तपाईंको बच्चाहरूलाई मनपर्दछ, र त्यसपछि बच्चाहरु लाई छान्नुहोस् 3-4 सूचीमा आकर्षणहरू. यो तरिका सबै जना खुशी छन् र केहि दिन दिनको प्रतिक्षामा केहि छ.
2. AirBnB मा रहनुहोस्
Airbnb सस्तो छ, बढी निजी, र एक घरेलू भावना छ, जुन बच्चाहरूका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब घरबाट टाढा हुन्छ. AirBnB युरोपमा पारिवारिक बिदाको लागि उत्तम आवास विकल्प हो किनभने युरोपमा होटेलहरू महँगो हुन्छन्, बिहानको खाजामा पनि. Airbnb मा रहँदा तपाइँलाई खाना पकाउन एक भान्छाकोठा प्रदान गर्दछ, खाजा-जाने, र ब्रेकफास्ट समय जब तपाईं दिन छलफल गर्न सक्नुहुन्छ.
पनि, बच्चाहरू र अभिभावकहरूको लागि प्रशस्त ठाउँ र गोपनीयता छ, लामो दिन अन्वेषण पछि आराम गर्न.
3. युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि सुझावहरू: व्यस्त शहर केन्द्रबाट बाहिर निस्कनुहोस्
यूरोप प्राकृतिक दृश्य भण्डार र राष्ट्रिय निकुञ्जले भरिएको छ, उत्कृष्ट पैदल यात्रा ट्रेल्स र पिकनिक स्पटहरूको साथ. युरोप मा प्राकृतिक भव्यता यति बहुमुखी छ कि तपाईं साना बच्चाहरु संग यात्रा गर्दै छन् भने पनि, तपाईं अझै अन्वेषण गर्न सक्नुहुन्छ झरना र दृश्यहरू.
अधिकांश पार्कहरू पहुँचयोग्य छन् मार्फत रेल ठूला शहर केन्द्रहरु बाट. यदि तपाइँ अग्रिम योजना बनाउनुहुन्छ र तयार हुनुहुन्छ, त्यस्तो कुनै कारण छैन किन तपाई महान् घर बाहिर मजा लिनुहुन्न र ताजा हावाको आनन्द लिनु हुँदैन, वन, र थीमयुक्त पार्कहरू.
4. तपाईंको यातायात बुक गर्नुहोस्
बच्चाहरूको साथ यात्रा गर्दा एक विदेशी ठाउँ वरिपरि जानको लागि तपाईंको मार्ग जान्नु महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं हराउन र पैदलमा वा एयरपोर्टबाट यात्रा शहर वरिपरि घुम्न चाहनुहुन्न, मौसम जस्तोसुकै. त्यसैले, युरोपमा यातायातका साधनहरू योजना र बुकिंग गर्नाले ठूलो पारिवारिक बिदाको प्रतिज्ञा हुनेछ.
सार्वजनिक यातायात अत्यधिक विश्वसनीय छ र युरोपमा आरामदायक. शहर केन्द्रहरू भित्र र बाहिर धेरै यात्रा विकल्पहरू छन्. रेल र ट्रामको वरिपरि पुग्ने बच्चाहरूका लागि आदर्श हो किनकि तपाईं जताततै पुग्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको यात्राको बजेटमा ट्राफिकबाट बच्नुहोस्.
तुलनामा कार भाडामा लिदै र पार्कि forको खोजीमा वा सडकमा केन्द्रित गर्दै ठूलो समय खर्च गर्दै, तपाईं सवारी र नाश्ता आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, जब एक युरोप मा बच्चाहरु संग यात्रा ट्रेन. एक विशाल युरोप मा यात्रा को लाभ बच्चाहरू रेलमार्फत बच्चाहरू यूरो रेल पासको साथ निःशुल्क यात्रा गर्छन्.
5. युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि सुझावहरू: पैक लाइट
यात्रा युरोपको रेल स्टेशनहरू स्ट्रोलर र ठूला सूटकेसका साथ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ. केही रेल स्टेशनहरूमा लिफ्ट वा एस्केलेटरहरू हुँदैनन्, त्यसैले यो प्याक र प्रकाश यात्रा उत्तम छ. एक फिल्ड योग्य stroller र क्यारी-अन प्याक गर्न निश्चित गर्नुहोस्, यस तरिका यदि बच्चाहरू पर्याप्त पुरानो छन्, तिनीहरूले आफ्नो सामान राख्न सक्छन्.
यसबाहेक, प्याकिंग लाइट भनेको पारिवारिक यात्राका लागि सबै आवश्यक चीजहरू प्याक गर्नु हो. यसरी, बच्चाहरूलाई रंग सides्ग्रहको साथ ट्रेन सवारीमा व्यस्त राख्दै, अडियोबुकहरू, वा आईप्याडमा कार्टुन हेर्ने समय, एक ठूलो मद्दत हुनेछ.
म्यूनिख बाट पासौ ट्रेन मूल्यहरू
न्युरेम्बरबर्ग बाट पासौ ट्रेन मूल्यहरू
साल्जबर्गबाट ​​पासौ ट्रेन मूल्यहरू
6. युरोपमा बच्चाहरूसँग खाँदै
तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि युरोपमा रेस्टुरेन्टहरूले बच्चाहरू भोजन प्रदान गर्दैन, त्यसैले यसको वयस्कहरू’ सबैको लागि अंश. यो विशेष गरी नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ उदाहरणको लागि यदि तपाईं इटालीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले बच्चाको आकार पिज्जा वा पास्ता अंशहरू फेला पार्नुहुने छैन, त्यसैले तयार हुन.
तर, तपाईंले खाना खानुपर्दैन. युरोपमा बच्चाहरूसँग यात्राको लागि हाम्रो एक उत्तम सल्लाह रहेको छ परिवार पिकनिक. युरोपको पार्क र प्रकृतिको बारेमा धेरै कुरा भनिएको छ किनकि हरियो भव्य भूमि केवल तपाईंको परिवार पिकनिक होस्ट गर्न डिजाइन गरिएको हो. पेस्ट्री लिनुहोस्, ताजा फल, र स्थानीय बजारमा तरकारीहरू र तपाईं खाजा पिकनिकको लागि तयार हुनुहुन्छ. किसानहरूको बजारमा मूल्यहरू सुपरमार्केट र रेस्टुरेन्टहरूको तुलनामा सस्तो हुन्छ. यो सबै माथि माथि, केवल विचारहरूको विचार गर्नुहोस् जुन तपाईं एकल टोकेको साथ रमाइलो लिनुहुनेछ र निःशुल्क रूपमा पूर्ण रूपमा.
7. युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि सुझावहरू: युरोपमा डुat्गा र नि: शुल्क हिड्ने टुरहरू
तपाईं यो नक्शा र पुस्तकहरू र अनुप्रयोगहरूको साथ सबै गर्न सक्नुहुनेछ, तर डु joining्गामा सम्मिलित हुने वा हिड्ने यात्रा उत्तम हो. धेरै यूरोपियन शहरहरूमा एक स्थानीय गाईड संग नि: शुल्क शहर पैदल यात्रा छ. यो प्रसन्न गाईडले शहरको सब भन्दा राम्रो-गोप्य रहस्यहरू देखाउँनेछ र भन्नेछ, तपाईं सडकको भूलभुलैयामा हराउनु बिना नै. गाईडले स्थानीय खाद्यान्नहरू सेट खाजा मेनूहरूको साथ पनि औंल्याउँछ र शहरमा के गर्ने भन्ने बारे उत्तम सल्लाह दिन्छ.
युरोप नहर र नदीहरूले भरिएको छ, त्यसैले एक डु tour्गा यात्रा अर्को रमाईलो छ र यात्रा र अन्वेषण गर्न अद्वितीय तरीका. यो बच्चाहरूको लागि रमाईलो र तपाईंको लागि आरामदायक हुनेछ.
8. क्यारोसेल सवारीहरूको लागि समय बनाउनुहोस्
अधिकांश यूरोपीय शहरहरूमा मुख्य शहर वर्गमा एक चम्किलो र भव्य carousel हुनेछ. बरु अर्को साइटमा चलाउनुको सट्टा, रोक, र किद्दोजलाई उनीहरूले चाहानु भएको धेरै सवारीहरूमा जान अनुमति दिनुहोस्. जब एफिल टावर तपाईको पछाडि हुन्छ तब कराउजेल सवारीको मजा लिदै हुनुहुन्छ, बच्चाहरू र ठूला अपहरूको लागि एकदम अविस्मरणीय क्षण हो.
9. युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि सुझावहरू: "उफ्" लाई समय दिनुहोस्
केवल किनभने तपाई स्विजरल्याण्डमा हुनुहुन्छ, ग्यारेन्टी छैन सबै तपाईंको परिवार यात्रा मा सजीलो जानेछ. जब तपाईं बच्चाहरू सँग यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, जे पनि हुन सक्छ, युरोपमा पनि, so be sure to leave time for oops on the trip. Make time for unplanned surprises, ढिलाइ, ग्रम्पि किड्डोलाई धन्यवाद योजनामा ​​परिवर्तन गर्दछ, र उपस्थित र समायोजन गर्न को लागी तयार हुन.
10. पिट्ने मार्गबाट ​​बच्चाहरू युरोप देखाउनुहोस्
बच्चाहरूसँग यात्राको लागि हाम्रो शीर्ष सुझावहरू मध्ये तिनीहरूलाई कसरी देखाउदैछ युरोप मा कुटेको मार्ग बन्द यात्रा. मुख्य वर्गहरूमा जनसाधन हटाउनुहोस्, gelato का लागि लाइनहरु, र परिवार चित्रहरु, ती लुकेका ठाउँहरूमा लगेर, रमणीय गाउँहरु, र असाधारण प्रकृति.
बच्चाहरूलाई परिकथा र साहसिक मनपर्दछ, त्यसैले ती स्पटहरू लिनुहोस् पौराणिक कथाले बनेका छन्. सँगै समय बिताउने यो उत्तम तरिका हो, युरोप मा परिवार छुट्टी को सबै भन्दा राम्रो बनाउन, र युरोपको समृद्ध संस्कृति र इतिहासको बारेमा तिनीहरूलाई सिकाउनुहोस्.
युरोप वर्षको कुनै पनि समयमा एक महान पारिवारिक बिदा गन्तव्य हो. चाहे तपाईं एडभेन्चर खोज्ने परिवार हो वा दर्शनीय स्थलहरू र संग्रहालयहरूमा उत्सुक हुनुहुन्छ, युरोप यो सबै मिल्यो. साथै, युरोप परिवार मैत्री छ जब यो यातायातको कुरा आउँछ र विशेष शहर पारित गर्न. हाम्रो 10 युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि उत्तम सुझावहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ जब तपाईं आफ्नो अर्को वा पछाडि महल र महापुरूषहरूको भूमिमा पहिलो यात्रा गर्नुहुन्छ।.
पादुआ भेनिस ट्रेन मूल्यहरु
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईलाई युरोपमा सबै भन्दा राम्रो परिवार बिदाको योजनाको लागि ट्रेनमा मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा पारिवारिक बिदाका लागि १० सर्वश्रेष्ठ सुझावहरू" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://embed.ly/code?URL =Https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/ اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
Europewithkids पारिवारिक बिदा familytrip Familytripeurope familyvacation traintravelwithkids